Xiaomi သည် Mi9 နှင့် Mi Mix35G အသစ်များဖြင့် MWC နံနက်ခင်းကိုစတင်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် MWC ပွဲ၌ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် 5G ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုစတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင် Xiaomi Mi9 အသစ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကတရားဝင်ပြသခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကတ်အားလုံးအား 5G ဖြင့်လောင်းသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုဖြန့်ချိသည့်အချိန်တွင်လည်းဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုသတ်မှတ်သည် ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Mi Mix3။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Xiaomi Mi9အသစ်ကိုအတုပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေး (AI) ကင်မရာ၊ ၂၀ ဝပ်ဝပ်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရစိတ်စွဲမှတ်သွားစေသည်။ chipset ကို အတွင်းပိုင်း mount သော Qualcomm Snapdragon 855 ။ Mi9အသစ်ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ယူရို ၄၄၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရအရေးပါသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည်အရောင်းကိန်းဂဏန်းများနှင့်တူသောတင်ဆက်မှုများ၌ပြုလုပ်သောပွဲများစွာမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်မကြာမီတွင်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောမီဒီယာနှင့် Mi ပရိသတ်များကမျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်ကိုမကြာမီပြောင်းလဲသွားသည်။ 5G ကဒီမှာပါ၊ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည့်အရာမှာ Mi Mix3အသစ်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးနှင့်အတူဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် Gigabit-class download ပြုလုပ်ထားသော Sub-50GHz signal ကိုချိတ်ဆက်ရန် Snapdragon X5 6G modem ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ 4G ကွန်ယက်ထက် ၁၀ ဆမြန်သည်။ ဒါ့အပြင်ဖုန်းကိုအစွမ်းထက်ထည့်သွင်းရန်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီကိရိယာအသစ်ကဖြစ်လိမ့်မယ် မေလနောက်လတွင်ရရှိနိုင်သည် Mi Mix3သည် 5G မပါဘဲရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးတွင်၊ ပထမ MWC ၏ပထမနာရီများအတွင်းအခြားတစ်ခုမရောက်ရှိပါက 5G ဖြင့်ပထမဆုံးထုတ်ကုန်ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။
1 Mi9သည် AI ပါသည့်ကင်မရာသုံးချောင်းဖြင့်ပြသသည်
2 Mi9အတွက်ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲနှင့်စျေးနှုန်းများ
Mi9သည် AI ပါသည့်ကင်မရာသုံးချောင်းဖြင့်ပြသသည်
Mi9သည်လက်ရှိတွင်နိုင်ငံများစွာတွင်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးမော်ဒယ်ကို Mi XNUMX ကိုပြသခဲ့သည်။ Mi XNUMX သည်စမတ်ဖုန်းကိုထပ်ဖြည့်သည်။ ၄၈ megapixel ရှိတဲ့ Sony IMX48 586/1 အာရုံခံကိရိယာ? ၎င်း၏အဓိကကင်မရာတွင်မှန်ဘီလူး ၂ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၁၆ megapixel အကျယ်ထောင့်ရှိကင်မရာတစ်လုံးနှင့် ၁၂ megapixel telephoto မှန်ဘီလူးပါသောကင်မရာများကိုပြုလုပ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ Mi9အသစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည် DxOMark မှပြုလုပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်ဖုန်းများအဆင့်တွင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ DxOMark သည်၎င်းသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအမျိုးအစားတွင်ပထမဆုံးနေရာကိုပေးသည်။
Mi9အတွက်ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲနှင့်စျေးနှုန်းများ
Mi +9+ 6GB သည် လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ စ၍ ရနိုင်သည် my.com, Mi Stores နှင့် အမေဇုံ € 449 ၏စျေးနှုန်းမှာ။ ထို့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ညနေ ၁း၀၀ နာရီတွင် Amazon သည်ထိုစက်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မတ်လ ၂၉ ရက်မှ စတင်၍ Mi 24 ကို Xiaomi ၏တရားဝင်ရောင်းအားလိုင်းအားလုံးတွင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အသစ် Xiaomi က Mi96 + 128 GB အထူးသီးသန့်မတ်လ ၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်အကြားဝယ်ယူနိုင်သည် my.com, Mi Stores နှင့် MediaMarkt€ 499 ၏စျေးနှုန်းမှာ။ ထို့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ညနေ ၁း၀၀ နာရီတွင် MediaMarkt သည်စက်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ Mi 24 ကိုအခြားတရားဝင် Xiaomi အရောင်းဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ Mi 13.00 ကိုဒီ model မှာရရှိနိုင်ပါတယ် စန္ဒရားအနက်ရောင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Xiaomi သည် MiW နှင့် Mi Mix93G အသစ်တို့ဖြင့် MWC နံနက်ခင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
Nanoleaf အလင်း Panels - Rhythm Edition၊ သင်၏နေရာကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ထွန်းလင်းခြင်း [analysis]